Shirka Wasiirrada Turkiga iyo Afrika oo ka furmay Istanbul
Sunday February 11, 2018 - 23:32:52 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Magaalada Istanbul ee Dalka Turkiga waxaa maanta ka furmay shir u dhaxeeya Wasiirrada arrimaha dibadda Afrika iyo Turkiga.
Shirkan oo ah midka 2aad ee dib u eegidda labada dhinac ayaa waxaa ka qeybgelay Xubno ka socda Waddamada Afrika.
Dalalka Soomaaliya,Suudaan,Jabuuti iyo Tanzania ayaa shirkan uga qeyb galay korjoogto ahaan,maaddaama aysan horay uga mid ahayn Madasha Istiraatiijiyadda Turkiga iyo Afrika.
Soomaaliya shirkan waxaa uga qeybgelaya Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda, Danjiraha Somaliya ee Turkiga iyo Agaasimaha waaxda xiriirka Dibadda ee Wasaaradda arrimaha dibadda.
Shirkan waxaa uu soconayaa maanta iyo berri,waxaana la filayaa in la soo geba gabeeyo,iyada oo la filayo in war murtiyeed laga soo saarayo.